Yakasarudzika cosmetic bhegi fekitori, vagadziri uye vanotengesa - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Cosmetic bhegi
Yakakura cosmetic bag
Dhizaini yemafashoni, yakanaka uye yakasimba, iri nyore kutakura. Micheka yemhando yepamusoro yemafashoni inowirirana nehembe dzako.Kusanganiswa kwakaringana kwekuwedzera-kwese kwese kuruka uye hukuru-mavara machira kunoita kuti iwe utarise bato nekukasira!
Shell cosmetic bhegi
Anotakurika cosmetic bhegi, super fiber zvinhu zvekunze rukoko, kukwenya-kusagadzikana uye kupfeka kusagadzikana, giraidhi yechinyakare chimiro, fashoni uye nyowani, diki saizi, hombe chinzvimbo.
Nylon bhegi rekuzora
Chiedza ruoko gadzira-up bhegi, nylon jira, anti-scratch kusakara nemishonga, nyowani fashoni, diki chinzvimbo, matatu mavara sarudzo.
Sardine 3D maruva maruva, matsva uye ane fashoni, diki saizi uye hukuru kugona, nyore kutakura.
Yakapetwa-yakapetwa gauze, rakaumbwa seruva, diki muhukuru, rakakura musimba, rinopetwa, uye nyore kugamuchira.